Vakazvipa Nemwoyo Unoda kuNorway | Yokudzidza
SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Armenian (West) Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bicol Bislama Bulgarian Cambodian Catalan Cebuano ChiSutu (Lesotho) ChiTetun Dili Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Chitumbuka Cibemba Croatian Czech Danish Dutch Efik Estonian Ewe Fijian Finnish French Ga Georgian German Greek Greenlandic Guarani Haitian Creole Hiligaynon Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Kazakh Kikongo Kikuyu Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Korean Kwangali Kwanyama Latvian Lingala Lithuanian Luo Malagasy Malay Maltese Marathi Maya Mongolian Myanmar Ndebele Ndonga Nepali Ngabere Niuean Norwegian Nzema Oromo Ossetian Pangasinan Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese (Brazil) Punjabi Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Rarotongan Romanian Russian Samoan Sepedi Serbian (Cyrillic) Serbian (Roman) Setswana Seychelles Creole Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swati Swedish Tagalog Tahitian Tatar Telugu Thai Tigrinya Tiv Totonac Tshiluba Tsonga Turkish Twi Ukrainian Umbundu Urdu Uzbek Venda Vietnamese Wolaita Xhosa Yoruba Zulu
Vakazvipa Nemwoyo Unoda—kuNorway
MAKORE mashomanana apfuura, Roald nemudzimai wake Elsebeth, vainge vava kusvitsa makore 50, vaiva neupenyu hwakanakanaka vachigara muBergen, guta rechipiri pakukura muNorway. Vaishingaira muungano pamwe chete nemwanasikana wavo Isabel uye mwanakomana wavo Fabian. Roald aiva mukuru uye Elsebeth ari piyona, Isabel naFabian vari vaparidzi vaiita zvakanaka.
Asi muna September 2009, mhuri iyi yakasarudza kuita zvayainge isati yamboita, zvokunoparidza kwevhiki rimwe chete kunzvimbo iri kure. Saka Roald, Elsebeth naFabian aiva nemakore 18 panguva iyoyo, vakaenda kuchitsuwa cheNordkyn chiri kuFinnmark, kumusoro kweArctic Circle. Vari ikoko, mumusha weKjøllefjord, vakaparidza pamwe chete nedzimwe hama nehanzvadzi dzainge dzauyawo ikoko. “Pakatanga vhiki iroro,” anoyeuka kudaro Roald, “ndakanzwa ndichigutsikana kuti ndainge ndaronga zvinhu zvangu kuti ndikwanise kuita basa iri rinokosha kwevhiki rose.” Asi vhiki iroro rati fambei, Roald akatanga kunzwa kusagutsikana. Chii chakaitika?
“Tisingambozvifungiri,” anodaro Roald, “Mario, piyona wemuFinnmark akatibvunza kana taida kutamira kuguta rinonzi Lakselv kunobatsira ungano yaiva nevaparidzi 23.” Roald akashaya neremuromo nemubvunzo iwoyo waaisatarisira. Anotsanangura kuti: “Ini naElsebeth tainge tambofunga zvokunoshanda kwaidiwa vaparidzi vakawanda, asi taifunga kuti taizozviita pava paya vana vabva pamba.” Asi kunyange mumazuva mashomanana aaiparidza munzvimbo iyi, Roald ainge aona kuti vanhu vaida kudzidza nezvaJehovha. Vaida kubatsirwa panguva iyoyo, kwete pava paya. Anoyeuka kuti, “Mubvunzo iwoyo wakandinetsa chaizvo zvokuti mazuva akawanda ndaishaya hope.” Mario akabva aenda naRoald nemhuri yake kuLakselv iri kumaodzanyemba kweKjøllefjord nemakiromita anenge 240. Mario aida kuti vazvionere vega ungano duku yaivako.
MuLakselv, Andreas mumwe wevakuru vaviri variko, akavaratidza nzvimbo yacho neImba yoUmambo. Ungano yacho yakavagamuchira neushamwari, ikaudza Roald naElsebeth kuti vaizofara chaizvo kudai mhuri yavo yaizotamira ikoko kuti ivabatsire mubasa roUmambo. Achinyemwerera, Andreas akataura kuti ainge atorongera Roald naFabian kuti vabvunzurudzwe nokuda kwebasa! Vaenzi ava vaizoita sei?
Pakutanga, Fabian akati: “Handina chido chokutama.” Haana kufarira pfungwa yokusiya shamwari dzake dzepedyo dzaainge akura nadzo muungano yavo kwava kunogara mukaguta kaduku. Uyewo, ainge asati apedza kosi yake yokugadzira magetsi. Zvisinei, Isabel (aiva nemakore 21) paakabvunzwa zvaaifunga nezvekutama, akati: “Ndizvo chaizvo zvandakagara ndichida!” Asi Isabel akazoti: “Pandakafungisisa, ndakanetseka kuti ‘Iyi ipfungwa yakanaka here? Handizosuwi shamwari dzangu here? Ndongoramba ndiri muungano medu mandajaira here?’” Ko Elsebeth aitiwo chii nenyaya yacho? “Ndakafunga kuti ndiJehovha ainge apa mhuri yedu basa iri,” anodaro, “asi ndakafungawo imba yedu yatainge tabva kugadziridza uye zvose zvaivamo zvatainge taunganidza mumakore 25.”
Vhiki racho parakapera, Roald nemhuri yake vakadzokera kuBergen, asi vakaramba vachingofunga hama nehanzvadzi dzavo dzechiKristu dzokuLakselv, iri kure nemakiromita anenge 2 100. “Ndakanyengetera kuna Jehovha kakawanda,” anodaro Elsebeth, “uye ndaigara ndichitaura neshamwari dzatainge tawana nyaya dzezvataisangana nazvo uye taitumirana mapikicha.” Roald anoti: “Ndaida nguva yokunyatsofungisisa nezvokutama. Uye ndaida kutanga ndaona kuti zvainyatsoita here kuti tinogarako. Taizowana sei zvokurarama nazvo? Ndakanyengetera kuna Jehovha kakawanda uye ndaikurukura nemhuri yangu uye nedzimwe hama dzine ruzivo.” Fabian anoyeuka kuti: “Pandairamba ndichifunga nezvazvo, ndipo pandaionawo kuti ndaisava nechikonzero chine musoro chokurega kuenda. Ndakanyengetera kuna Jehovha kakawanda, uye chido chokutama chakawedzera zvishoma nezvishoma.” Zvakadini naIsabel? Kuti agadzirire kutama, akatanga kupayona muguta ravaigara. Akazonzwa kuti ainge agadzirira kutama kwapera mwedzi mitanhatu achipayona, uye achidzidza chaizvo Bhaibheri ari oga.
KUTORA MATANHO OKUZADZISA CHINANGWA CHAVO
Chido chokunoshumira kwaidiwa vaparidzi vakawanda zvachakawedzera, mhuri iyi yakatora matanho okuti izadzise chinangwa chayo. Roald aiva nebasa raiva nemari raaida chaizvo, asi akakumbira kutora rivhi kwegore. Zvisinei, waaishandira akamukumbira kuti apote achiti mavhiki maviri achishanda, uye matanhatu asingashandi. Roald anoti, “Mari yandaitambira yakadzikiswa chaizvo, asi zvakashanda.”
Elsebeth anoti: “Murume wangu akandikumbira kuti nditsvake imba kuLakselv uye munhu aizorenda imba yedu iri kuBergen. Zvakatora nguva yakawanda uye zvaida kushanda nesimba asi takabudirira. Papera kanguva, vana vakawana kwokumboshanda,” anowedzera kudaro, “uye vaitibatsira nemari yezvokudya neyokufambisa.”
Isabel anoti: “Guta ratakatamira zvariri duku, dambudziko rangu guru raiva rokuwana basa kuti ndizviriritire ndichipayona. Dzimwe nguva zvaiita sokuti ndaisazomboriwana.” Isabel aikwanisa kuwana mari yezvaaida nokubvuma chero mabasa aaiwana. Mugore rokutanga, akawana mabasa anokwana mapfumbamwe. Zvakafambawo sei kuna Fabian? “Kuti ndipedzise kudzidzira zvemagetsi, ndaifanira kuwana basa raizondipa unyanzvi hunodiwa. Ndakazviitira kuLakselv. Ndakazopasa bvunzo dzangu ndikawana kwekumboshanda ndichiita zvemagetsi.”
KUWEDZERA KWAKAITA VAMWE USHUMIRI HWAVO
Marelius naKesia vachiparidzira mukadzi wechiSami kuNorway
Marelius nemudzimai wake Kesia, vaidawo kunoshumira kwaidiwa vaparidzi vakawanda. Marelius ava nemakore 29 anoti: “Hurukuro dzepagungano uye kubvunzurudzwa nezvokupayona zvakaita kuti ndifunge zvokuwedzera ushumiri hwangu.” Asi kana ari Kesia, ava nemakore 26, kutama achisiya vemhuri kwaiva chipingamupinyi. Anoti, “Kufunga nezvokugara kure nevanhu vandaida kwaindityisa.” Uyewo Marelius aishanda svondo rose kuti abhadhare chikwereti cheimba yavo. Anoti: “Takakwanisa kutama, nokuti Jehovha akatibatsira uye takanyengetera kakawanda tichimukumbira kuti atibatsire kuchinja zvinhu.” Vakatanga nokuwedzera nguva yavaidzidza Bhaibheri. Vakabva vatengesa imba yavo, vakarega basa uye muna August 2011, vakatamira kuguta reAlta riri kuchamhembe muNorway. Marelius anoita zveakaunzi uye Kesia anoshanda muchitoro kuti vawane mari yokushandisa vachipayona.
Knut nemudzimai wake Lisbeth, vane makore ari kuma35, vakakurudzirwa nenyaya dzomuBhuku Regore dzevaya vanoshumira kunodiwa vaparidzi voUmambo vakawanda. “Zvavakasangana nazvo zvakaita kuti tifunge nezvekunoshumira kune imwe nyika,” anodaro Lisbeth, “asi ndainge ndisina chokwadi chokuti munhu akaita seni aizozvikwanisa.” Kunyange zvakadaro, vakatora matanho okuti vazadzise chinangwa chavo. Knut anoti: “Takatengesa furati redu uye kuti tichengetedze mari, takanogara naamai vangu. Kuti tiravidze kuti kushumira kune imwe nyika kunoita sei, takatanga kupinda neungano yemutauro weChirungu muBergen kwegore, kwataigara naamai vaLisbeth.” Pasina nguva, Knut naLisbeth vakaona kuti vainge vagadzirira kutama vachienda kure, kuUganda. Vanopota vachidzokera kuNorway kwemwedzi miviri pagore kunoshanda. Zvinoita kuti vawane mari yokushandisa vachiparidza nguva yakazara muUganda kwegore rose.
“RAVIRAI HENYU MUONE KUTI JEHOVHA AKANAKA”
Knut naLisbeth vachidzidza neimwe mhuri kuUganda
Zvinhu zvakazofamba sei kuvashandi ava vakazvipira? Roald anoti: “Kuno, tinopedza nguva yakawanda tiri pamwe chete semhuri kupfuura zvataiita tiri kuBergen. Mhuri yedu yabatana chaizvo. Chave chiri chikomborero kuona vana vedu vachikura pakunamata.” Anowedzera kuti: “Uyewo hatichanyanyi kufunga nezvepfuma. Hatichaioni seinonyanya kukosha.”
Elsebeth akaona kuti aifanira kudzidza mumwe mutauro. Nei? Nokuti ndima yeUngano yeLakselv inosanganisira musha weKarasjok, mune ruzhinji rwevanhu vechiSami, vanhu vokutanga kugara nechokuchamhembe muNorway, Sweden, Finland, uye Russia. Saka kuti zviite nyore kutaura nevanhu ava, Elsebeth akadzidzira mutauro wechiSami. Iye zvino ava kukwanisa kutaura mutauro iwoyo zvishoma. Ari kunakidzwa here nendima yake itsva? Achinyemwerera, anoti: “Ndiri kuitisa zvidzidzo zveBhaibheri zvitanhatu. Pane kumwe kwandinganakidzwa here kupfuura kuno!”
Fabian uyo ava piyona uye mushumiri anoshumira anotaura kuti iye naIsabel vakabatsira vechiduku vatatu vomuungano yavo itsva vaida kukurudzirwa kuti vawedzere kushingaira muungano. Iye zvino vechiduku vacho vatatu vava kushingaira muushumiri. Vaviri vacho vakatobhabhatidzwa uye vakatora upiyona hwebetsero muna March 2012. Mumwe wacho ainge ava kusiya chokwadi akaonga Fabian naIsabel nokumubatsira kwavakaita kuti “asimbezve pakunamata.” Fabian anoti: “Ndakabayiwa mwoyo paakataura kudaro. Zvinofadza chaizvo kubatsira mumwe munhu!” Isabel anoti: “Kuno, ‘ndanyatsoravira ndikaona kuti Jehovha akanaka.’” (Pis. 34:8) Anowedzera kuti: “Uyezve kushumira kuno kunozonakidza!”
Marelius naKesia vava noupenyu husina twakawanda-wanda asi hunogutsa. Iye zvino ungano yokuAlta kwavakatamira yava nevaparidzi 41. Marelius anoti: “Ndichitarira shure, zvinokurudzira chaizvo kuona kuchinja kwaita upenyu hwedu. Tinoonga Jehovha nokuti tinogona kumushumira tiri mapiyona kuno. Hapana chimwe chinogutsa kupfuura izvi.” Kesia anowedzera kuti: “Ndakadzidza kunyatsovimba naJehovha, uye ave achititarisira zvakanaka. Ndakaonawo kuti kugara kure nehama dzangu kunondibatsira kuti ndinyanye kukoshesa nguva dzatinova pamwe chete. Handina kumbobvira ndademba zvatakasarudza.”
“Mhuri yedu yabatana chaizvo.”—Roald
Knut naLisbeth vari kuitawo sei kuUganda? Knut anoti: “Zvakatora nguva kuti tijaire nzvimbo itsva uye tsika. Mvura, magetsi uye kurwara mudumbu zvinouya zvichienda, asi vanhu vokudzidzisa Bhaibheri isaruraude!” Lisbeth anoti: “Kubva kwatinogara, zvinongoda hafu yeawa kuti tisvike kundima dzisati dzamboparidzirwa mashoko akanaka. Asi patinoendako, tinoona vanhu vachiverenga Bhaibheri, vachikumbira kuti tidzidze navo. Kudzidzisa vanhu vanozvininipisa vakadaro mashoko ari muBhaibheri kunofadza zvisingatauriki!”
Mutungamiriri wedu Kristu Jesu anofanira kunge achifara chaizvo paanoona ari kudenga basa rokuparidza raakatanga richiitwa munzvimbo dzakawanda dziri panyika! Chokwadi, vanhu vaMwari vose vanofara chaizvo kuzvipa nemwoyo wose kuita zvakarayirwa naJesu zvokuti vaite “kuti vanhu vemarudzi ose vave vadzidzi.”—Mat. 28:19, 20.
Kushandisa zvinotaura Bhaibheri kunogona kukubatsira kugadzirira kunoshanda kunonyanya kudiwa vaparidzi voUmambo:
Nyengetera kuna Jehovha kuti akupe chido uye “uchenjeri hunobatsira.”—Zvir. 3:21; VaF. 2:13; Jak. 1:5.
Tsvaka mazano kune vamwe vaunonamata navo vane uchenjeri. “Munhu anofamba nevanhu vakachenjera achava akachenjera.”—Zvir. 12:15; 13:20.
Nyatsoronga. “Zvirongwa zvomunhu anoshingaira zvinobatsira.”—Zvir. 21:5.
Ita zvawakaronga. ‘Ita zvakanaka.’—Pis. 37:3.
Kana ukatora matanho aya, unogona kuva nechokwadi chokuti Jehovha achakukomborera!—Zvir. 16:3.
Tumirawo vamwe Tumirawo vamwe Vakazvipa Nemwoyo Unoda—kuNorway